Spotify akaụntụ na-adịgide adịgide na-ewepụ Spotify
Ọ mgbe ụfọdụ yiri uche na-adịghị na a onye ọrụ chọrọ ka n'aka na Spotify ọrụ na-abụghị nanị kwụsị ma yiri ngwa ọdịnala na-ẹfep si ngwaọrụ na usoro na nke a na-eji. Wepụ Spotify ngwa bụ otu ihe ahụ dị wepụ ihe ọ bụla ọzọ nkịtị ngwa Otú ọ dị onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na Filiks na e kwuru okwu ya na akụkụ ikpeazụ nke a nkuzi na-abụghị nanị soro ma ha na-na-etinyere na nke kacha mma n'ụzọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta.
Part 1.How ka ihichapụ Spotify akaụntụ na-adịgide adịgide
Part 2.How wepụ Spotify site na kọmputa
Part 3.Removing Spotify si android
Download Spotify music free na TunesGo tupu ihichapụ Spotify akaụntụ
1. Olee ka ihichapụ Spotify akaụntụ ihichapụ kpam kpam Spotify akaụntụ
E nwere ụfọdụ ihe ndị na-ga-atụle mgbe usoro a soro na nke kacha mma n'ụzọ na onye ọrụ ya mere kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà Filiks na-abụghị nanị etinyere ma ha na-sokwaara iji jide n'aka na needful na-eme.
The mbụ ihe na nke a bụ na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na akaụntụ kwụsị site na desktọọpụ ahịa n'agbanyeghị ihe ọ bụla na ndenye aha larịị bụ dị ka niile etoju na-kwụsị na n'otu ụzọ ntụgharị free akaụntụ, ikpe, adịchaghị na akaụntụ, na-amụrụ akaụntụ na ezinụlọ na akaụntụ.
Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ịlele kaadị ma ọ bụ akaụntụ ọzọ yiri ọmụma na-eme ka n'aka na Spotify ndenye aha ila kagbuo Otú ọ dị nke a na-emetụta ndị na-akwụ ụgwọ na akaụntụ ejiri. The prorated ebubo ga-eme ka n'aka na akaụntụ kwụsị ọma.
Ọ na-atụ aro iji jide n'aka na usoro a na-kpọrọ aha n'okpuru-agbaso na nke kacha mma n'ụzọ nke mere na ihe ga-esi na-aghọ ndị mma niile ugboro. Iji jide n'aka na ya pụta bụ mma niile ugboro ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe skips ọ bụla nzọụkwụ na nke a na ọ dị ezigbo mkpa ka ọ ga-eduga onye ọrụ kwupụta kasị mma pụta na akaụntụ ga-ehichapụ-enweghị ọ bụla nke na nsogbu.
Iji mee ka ndị kasị mma ojiji nke usoro ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a nanị site eme n'aka na usoro a etinyere na kasị mma na n'ụzọ zere ihe ọ bụla hassle na niile nzọụkwụ e nwere onwe nkọwa na ga-ahụ na onye ọrụ mgbe ihu ọ bụla nke na a mgbe ọ na-abịa na akaụntụ nhichapụ:
1. The Spotify akaụntụ bụ na-enweta:
2. The banyere taabụ bụ na-pịrị:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ijide n'aka na kọntaktị ụdị na meghere:
4. The onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na ihe ndekọ wepụ na ịkagbu na-ahọrọ dị ka a mere:
5. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ijide n'aka na Hichapụ m Spotify akaụntụ a pịrị:
6. The onye ọrụ kwesịrị ugbu a na-ahụ na ihe kwesịrị ekwesị mere na-ahọrọ iji jide n'aka na nke na-abụghị nanị pacified ma nchegbu a na-akpọlite:
7. The ajụjụ a na-ahụ na-mesịa iji jide n'aka na ubi na-adịghị ekpe ide:
8. The Send ajụjụ button bụ mgbe ahụ na-pịrị iji jide n'aka na ihe ndekọ nchupu arịrịọ e zigara na ọ bụ-ahụ kwuru na usoro ga-enweta dechara.
2. Olee otú iji wepụ Spotify site na kọmputa
Ọ na-e kwuru tupu nakwa na Spotify-adịghị ga-emeso dị ka a pụrụ iche na-eme ka n'aka na nhichapụ a mere ọ bụla na n'elu ikpo okwu na nkịtị iwepu ụzọ na-abụghị nanị etinyere ma ha na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta . Iji jide n'aka na Spotify na-ehichapụ si compute onye ọrụ kwesịrị-eso usoro n'okpuru enweghị awụgharị ọ bụla nzọụkwụ:
1. Onye ọrụ kwesịrị ka ịnweta akara panel iji jide n'aka na usoro a triggered
2. Site n'ebe onye ọrụ kwesịrị iji họrọ Uninstall a omume taabụ iji jide n'aka na needful a mere:
3. The uninstall button bụ na-enwe mgbe na-ahọpụta ndị Spotify ngwa iji jide n'aka na usoro-agwụ ebe a:
3. Iwepụ Spotify si iPhone
Ọ bụkwa a dị mfe usoro na omenala usoro a ga-kwuru ebe a:
1. Onye ọrụ kwesịrị ka enweta ma jide ngwa iji jide n'aka na usoro a malitere:
2. The ojiji mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na obe button na-enwe na onye ọrụ na-akawanye ozugbo dị ka mma.
3. The Nhichapụ nhọrọ bụ ga-ahọrọ ime ka n'aka na needful a mere na usoro-agwụ ebe a:
Ngwa kwuru ebe a e ji mee ihe maka ngosi nzube na onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na otu usoro a na-rụrụ maka Spotify ngwa nke mere na needful a mere mfe.
Wepụ Spotify si android
Usoro nke wepụ Spotify-efegharị efegharị android bụkwa a dị mfe na onye na onye ọrụ dị nnọọ mkpa iji jide n'aka na ndị nkịtị ngwa uninstall usoro a soro na-eme ka n'aka na needful na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi n'ime chaachaa na ndị ọzọ yiri mbipụta banyere ngwa na-kpebiri enweghị ọtụtụ nsogbu.
1. The Google Play Store bụ na-enweta:
2. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ijide n'aka na pụta ìhè na akara ngosi na-enwe:
3. My ngwa ọdịnala a na-ahụ na-ahọrọ:
4. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na arụnyere ngwa na-meghere na Spotify ngwa na-ahụ odude na uninstalled maka ezi nke onye ọrụ nakwa dị ka usoro. Ọ ga-bụghị naanị ijide n'aka na ngwa e ehichapụ ma ọ ga-hụ na onye ọrụ ọma rụzuru ọrụ na ala na afọ ojuju. Ọzọ na ngwa na e gosiri ebe a bụ nnọọ n'ihi na Ama nzube na otu usoro-emetụta Spotify dị ka mma.
Esi Spotify adịchaghị Free?
Chọrọ Save Your Music na Spotify Playlist? Ya mere Easy
Olee otú na-ege ntị Music na Spotify Mobile
Spotify maka iPhone online ma ọ bụ Spotify offline maka iPhone
Spotify Client maka Windows Mac Linux na iOS na Android
Olee otú ọtụtụ Ihe Ị Maara Banyere Spotify Beta
> Resource> Spotify> Olee otú iji Hichapụ Spotify Akaụntụ-adịgide adịgide na Wepụ Spotify